Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Shiinaha » Socotada Shiinaha ayaa diyaar u ah oo ka walaacsan inay mar kale duulaan
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Socotada Shiinaha ayaa diyaar u ah oo ka walaacsan inay mar kale duulaan.
In ka badan kala badh jawaabeyaasha jawaabaha bixiyay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ka safraan dhul weynaha Shiinaha marka xuduudaha la furo, iyadoo Koonfur -bari Aasiya ay tahay meesha ugu sareysa ee doorashada, waxaa ku xiga Yurub, Australia/New Zealand iyo Bariga Aasiya.
Saddex meelood laba meel dadka safarka ah ee Shiinaha ayaa qaatay duulimaad gudaha ah tan iyo bilowgii masiibada COVID-19.
Boqolkiiba 81 jawaabeyaasha sahanku waxay sheegeen inay qorsheynayaan inay duuli doonaan ugu yaraan hal mar 12 bilood ee soo socda.
Kuwa qorshaynaya inay safraan, 73% waxay u safri doonaan firaaqada, kaliya 24% ayaa qorshaynaya safaro shaqo.
Sida laga soo xigtay sahankii ugu dambeeyay ee warshadaha safarka, 96% dadka safarka ah ayaa soo galay Shiinaha diyaar bay yihiin waxayna qorsheynayaan inay ku safraan hawada mustaqbalka dhow.
81% jawaabeyaasha sahanka ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay duulaan ugu yaraan hal mar 12 -ka bilood ee soo socda halka 50% ay qorsheynayaan inay duulaan xilliga dayrta.
Kuwa qorshaynaya inay safraan, 73% waxay sheegeen inay u tahay firaaqo kaliya 24% qorshaynta safarka ganacsiga.
Baahida loo qabo ayaa sidoo kale ka muuqata ShiinahaGaadiidka rakaabka, kaas oo muujinaya astaamaha soo kabashada xooggan. Laga bilaabo Sebtember 2021, taraafikada Shiinuhu waxay ahayd 87% heerarkii 2019 - waxay ka horeysaa Asia inteeda kale (42%).
Sahanku wuxuu daaha ka qaaday in saddex -meelood laba (66%) dadka safarka ah ee Shiinaha ay raaceen duulimaad gudaha ah tan iyo bilowgii masiibada. Xogta jadwalka ayaa muujineysa safarka gudaha ee Q4 inuu yahay mid ka sarreeya heerarkii hore ee masiibada, oo kordhay ilaa 15% marka la barbar dhigo Q4 2019.
Ka dib bilooyin xannibaadyo ay keeneen siyaasadda Zero-COVID ee Shiinaha, baahida sii kordheysa ee ku laabashada weyn ee safarka caalamiga ah iyo kan gobolka ayaa iska cad.
In ka badan kala bar (61%) jawaabeyaasha jawaabaha ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ka safraan dhul -weynaha Shiinaha mar haddii xudduuddu furan yihiin, iyadoo Koonfur -bari Aasiya ay tahay gobolka ugu sarreeya ee la doorto, waxaa ku xiga Yurub, Australia/New Zealand iyo Bariga Aasiya.